ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဘီဘီ များ | တိုယိုတာဘီဘီ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl White Toyota Bb 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 141 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Bb 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Brown Toyota bB SQ Version 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Bb 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Black Toyota Bb 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
Grey Toyota Bb 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
Pearl White Toyota Bb 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Brown Toyota Bb 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Pearl White Toyota Bb 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Black Toyota Bb 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Silver Toyota BB 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
silver Toyota Bb 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Lks 86 ညှိနှိုင်း
White Toyota Bb 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်...
Black Toyota BB 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်...
Black Toyota BB 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
ပြည်တွင်း လူစီးများတဲ့ ကားတွေထဲက တိုယိုတာ ဘီဘီများ
တိုယိုတာ ဘီဘီလေးတွေထဲဟာ ၀ဘ်ဂွန်ကား အသေးစားကားလေးတွေ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာက နေထုတ်တဲ့ လူစီးကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မော်ဒယ်ကနေ စပြီး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကား အမျိုး တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ပထမ မျိုးဆက်ကားတွေကိုတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၅ ကြားထုတ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ မျိုးဆက်ကတော့ ၂၀၀၅ ကနေ ယခုလက်ရှိထိ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဘရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၆ မော်ဒယ်တွေကို ဆူဘရု ဒတ်ရ်ှလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ စူပါ မီနီ အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပထမပိုင်း မျိုးဆက်မှာ လေးထောင့်ဆန်ပြီး ဒုတိယမျိုးဆက်ကားတွေကတော့ ပုံသဏ္ဍာန်ပိုပြီး အများကြီး ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်ကို ပြည်တွင်းမှာ ပိုပြီးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်တွေမှာ ၁၃၀၀ စီစီ နဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင် တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။။ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကတော့ မြင်းကောင်ရေ ၁၀၈ ရှိပြီး ၁၃၀၀ စီစီတွေကတော့ မြင်းကောင်ရေ ၉၁ မှာ ရှိပါတယ်။ အော်တို ၄ ချက် ဂီယာတွေကို သုံးတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ပေါ်မှုတည်ပြီး လေးဘီးမောင်းတွေကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ဘီဘီကားလေးတွေဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေ အတွက် မှုတည်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကား အမျိုး စားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကားအရွယ်အစားက မီနီကားလေးတွေထဲမှာ သင့်လျှော်ပြီး ဒီဇိုင်းက မြင့်မားပါတယ်။ ထိပ်ဖက် လေးထောင့်ကျပြီး အနောက်ဖက်ကို ကားခေါင်မိုး လျှောသွားတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလုံးကလည်း ကားအရွယ်အစား ဒီဇိုင်းနဲ့ လုံးဝကိုကိုက်ညီစွာ လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ရှေ့ နှင်းကွဲမီး ပါ၇ှိမှု မပါရှိမှုကတော့ မော်ဒယ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ကွဲပါတယ်။ အနောက်က မီးသီးတွေကလည်း ဆဌဂံ ပုံစံ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အနောက် သုတ်တံတွေပါ ပါဝင်ပြီး ကားပုံစံက ဆန်းသစ်ပါတယ်။ အနောက်ဖက် ခန်းကလည်း ပစ္စည်းတင်ဖို့နေရာ ကို ထားရှိပေးထားပါတယ်။ အနောက်ခန်းမှာ လူ( ၃) ယောက်ထိုင်နိုင်ပါမယ်။ ကား ဘေးဖက်က မှန်တွေမှာ မီးခြောက်တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ကားနေရာကို လုံလောက်အောင်အတွက် ကားရှေ့ခန်းမှာ ဂီယာနေရာတွေကို ချုံးကာ ဟန်းဂီယာတွေ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကားရဲ့ ကီလိုမီတာ ဒိုင်ခွက်ကိုတော့ ကား ဒတ်ရှ် ဘုတ်အလယ်မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ယ်ယူရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရာ
တိုယိုတာ ဘီဘီလေးတွေဟာ တိုယိုတာရဲ့ နာမည်ကြီး ဗီဗီတီအိုင် အင်ဂျင် သုံးကားတွေ ဖြစ်ပြီး ၁၃၀၀ စီစီ ဓာတ်ဆီကားလေးတွေ ဖြစ်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန် ဆန်းသစ်မှု၊ ကိုယ်ထည် သေးငယ်မှုကြောင့် ပါကင်ထိုးရာမှာ လွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် အသုံးပြုသူတွေရဲ့စိတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း သက်သာတာမို့ လူထုရဲ့ အကြိုက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေထိတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ မော်ဒယ်ပေါ် မှုတည်ပြီးတော့ရော ကားအခြေအနေပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ရော ကွဲပြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အောက်ကားတွေကို ရနိုင်သကဲ့သို့ ဂရိတ်မြင့်တဲ့ကားတွေကိုတော့ ကျပ်သိန်း ၁၂၀ နဲ့ ၁၃၀ မှာ ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက လေလံ ကုမ္ပဏီတွေကနေ ဌင်း၊ ရိူးရွန်တွေမှာ မျက်မြင်ကားတွေကိုဌင်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ဘီဘီကားလေူတွေကို ဇိမ်ခံကားတွေ အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် စုံကို ရနိုင်သကဲ့သို့ ဘီဘီကို ပိုပြီး ပေါ်လွင်စေတဲ့ ၀ိုင်နီရောင် ပုံစံမျိုးကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ လူ(၅) ယောက်စီးနိုင်ပြီး အဲကွန်း၊ တီဗီ၊ ရီမုတ်ကီးလစ် တွေကိုပါ ပါဝင်ပြီး မှန်ကာလာ အော်ရီဂျင်နယ်အနေနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုယိုတာ ဘီဘီကားလေးတွေဟာ အစိတ်အပိုင်း စုံလင်တဲ့ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဈေးလည်း သက်သာတာကြောင့် နှစ်သက်ပါလျှင် သုံးစွဲရန် သင့်လျော်တဲ့ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။